トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ qowladda Pachinko xaaladda heshay iyo dhiirogelin ka mid ah maalmaha shaqada iyo fasaxa
In qowladda pachinko ah, waxaa loo kala qaybin doonaa dukaanka si ay u muujiyaan niyad ah in dukaamada iyo maalmaha fasaxa si ay u muujiyaan niyad ah maalmaha shaqada. In tii pachinko isla, sababta farqiga noocan oo kale ah ka soo bixi, waxa aynu eegi doonaa haddii aan waa Mikiwamere dhiiriyo in meel kasta. qowladda Pachinko si ay u muujiyaan niyad ah in maalmaha shaqada, waxa aynu inta badan kaydisaa waa barakaysan yihiin shuruudaha goobta.
tusaale ahaan, ma soconayo xiriir dukaanka wanaagsan hore ee dukaamada idaacadda iyo maalinta toddobaadka.
dukaamada pachinko sida, iyo dad badan oo la dhimay si macaamiisha ah oo in maalmaha badan baa halkaas tegi doona, waxaa jira u janjeera in ay isku dayaan in ay xumme. Macaamiisha u yimid inuu maalmaha shaqada, marka la barbar dhigo macaamiisha kuwaas oo aan aad kaliya iman maalmaha fasaxa, waxa kale oo aad leedahay tiro kala duwan oo ah maalmaha sidoo kale sii wadaan in ay maal-gashadaan noo marayo. qowladda pachinko Good hawlgalka maalmaha shaqada, ku celi bogsaday by yaraynta maalmaha ka mid ah macaamiisha, waxaad fashaan oo ha si loo hubiyo in iibka deggan iyo faa'iido guud iyo hawlgalka.
waayo, in, laakiin a darajo yar inta lagu jiro toddobaadka, waxaa laga yaabaa inaan u fuliyaan ganacsiga si ay u muujiyaan niyad ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxa ay u muuqataa in arrin adag in aad u sheegto. Maalmaha, sababtoo ah waxaa jira 5 maalmood usbuucii, halkii ay ka soo bixiyey oo dhan hal mar, waxaa laga yaabaa in aad u yimaadeen inay wax yar dawada yar. Xaaladan oo kale, sidoo kale ay haleeshey ciddiyaha sixitaanka, goob Horukon, waxaa soo socda mar dambe ma arki kaliya la ruxruxo ee ROM waa status quo. Ma ka qayb maalmaha dhawr maalmood, ma awoodaan in ay ka heli maalmaha shaqada ee ku howl-gasha aadan.
Si kastaba ha ahaatee, sida qowladda pachinko ah, si axadaha iyo maalmaha ciidaha wuxuu noqon doonaa si loo hubiyo in maalintaas ururinta, waa in aan ku dhuftay Waxaan qabaa inay nabdoon tahay.
lagu beddelo in, laakiin waa qowladda pachinko si ay u muujiyaan niyad si ay sabti iyo axad ah, waxay noqon doontaa more caadi ah tii pachinko iyo dukaamada magaalada hareeraheeda ah in aadan awoodin in aad qalliin ah oo deggan. Tan iyo
Sabti iyo Axad sidoo kale waa maalintii kaca hawlgalka dabiici ah, sida caadiga ah waa in la sooco, si ay u soo kabashada waa wax caadi ah, waa in qowladda pachinko in dhacaya xaalad in ma noqon karo. Taasoo la micno ah in xaqiiqada ah waa in ay muujiyaan niyad si ay sabtida iyo axadda, maalinta fasaxa ee dadku isugu yimaadaan, waxa ay la xidhiidhay in ay maalmaha ka mid ah howlgalka la fikrad wanaagsan Maxaa yeelay, waxaa tiradaasi.
In sida qowladda pachinko ah, ama adeeg kaliya ka fiican sabtida iyo axadda, ama isku dayaan in ay diyaariyaan abaalmarinta of xadidan, waxaad arki karin dadaalka xitaa ka badan heshay ka. Racfaanka waqtiga ay jirto dano ah, ka badan tii pachinko ah si ay u muujiyaan niyad inta lagu jiro toddobaadka, waxaan u malaynayaa in ay fududahay in la fahmo. Waxaa intaa dheer, sabtida iyo axadda waxaa jira laba maalmood oo kaliya. Sababtoo ah waa tarjumaadda in racfaanka fudud dhiiri si ay u fahmaan in Dhanka kale, waa in aynu in weerarka loogu talagalay labada maalmood ee Sabtida iyo Axadda tagaan. Marka aad leedahay ujeedada, ka yar maalmaha orodka, waxaan u maleynayaa in dadka tii pachinko in ay soo saaraan dhiiri ah maalmaha fasaxa waxaa ku guuleystay boqolkiiba korodho.
qowladda pachinko of dhiirogelin, adeegyada iyo abaal-marinno lagu daro kubad soo baxay, heerka uu ku dhawaaqay oo ka mid ah boodhadhka iyo wixii la mid ah, waxaa jira qayb ka mid ah in loo arki karaa xitaa ka baxsan. qowladda Pachinko si aan u ciyaaro, aad ka soo baxdo dhiirogelin ee maalmaha shaqada iyo maalmaha fasaxa labada, heer ay dhiirogelin la arki karo waa in si lama filaan ah halkaas.